• Inona no lanjanao tsara indrindra ho an'ity jiro ity?
Miorina amin'ny ny be ny Tombanana, isika dia mitanisa ny lehibe mifandraika tsara indrindra vidiny amin'ny fotoana rehetra.
• Inona ny MOQ anao? Azoko atao ve ny mandefa loko mifangaro?
Azo antoka, ny MOQ ny loko tsirairay dia 1000pcs ankapobeny. Azonao ampanjifaina ny loko tsirairay MOQ.
• Azoko atao pirinty ny logo misy ahy ve ny vokatra?
Eny, azafady mandefa ny famantarana ho antsika sy izahay mamaritra sy hanao ny volavolan-sary ny vokatra amin'ny logo.
• Amin'ny maha-orinasa varotra anao, nahoana ianao no afaka miara-miasa amin'ny marika lehibe toy ny DURACELL sy Walmart?
Tsy orinasa varotra fotsiny izahay. Ny jiro sy ny tariby mampitony dia tsy sokajy lehibe, noho izany dia ilaintsika ny mandrindra ny soso-kevitr'ireo mpanjifantsika amin'ny fanomezan-dàlana manome fahafahaizana sy kalitao. Ary mifantoka amin'ny famolavolana sy fanavaozana ny vokatra vaovao isika izay mifototra amin'ny fanadihadiana ara-barotra sy ny mari-pahaizana momba ny varotra.
• Mikasa ny hividy flashlight aho, aiza no hividianako azy?
Tsy manome ny baiko an-tserasera isika amin'izao fotoana izao, raha liana amin'ny vokatray izahay, miangavy anareo izahay, ary mamela ny hafatrao anaty aterineto na mandefa mailaka aminay. [mailaka voaaro]
Raha te-handre ny nahamay indrindra namaly antso, masìna ianao, aza miantso antsika + 86 21 60 87 58 00.
• Ahoana no ahafahanao miantoka ny fotoana iatrehana?
1, Mba hisorohana ny fanemorana, nanangana rafitra fitsinjaram-pahefana feno sy matihanina avy amin'ny famokarana ka hatramin'ny fandefasana.
2, Manana traikefa manan-karena isika amin'ny KEY ACCOUNTS maneran-tany manerana an'izao tontolo izao.
3, Azontsika atao ny manitsy ny fehezan-dalàna momba ny sazy amin'ny fifanekena amin'ny fahatarana farany.
• Azonao atao ve ny manampy ahy hanamboatra ny jiroko na ny tariby mitondra fahazavana?
Eny, ataontsika ODM ho an'ny mpanjifa araka ny DURACELL, LLBEAN sy sns, isan-taona.
Fitaovam-piofanana mitondra hazavana mitondra hazavana
Toeram-pivarotana mozika stereo tsy misy mpividy mivantana
COB LED 180lm Teknolojia samihafa Wireless Laterna LED Lanterna miaraka amin'ny Control Controller
Car New Small Rechargeable 18650 Handy Size High Light Weather Resistance 10 Hours Light Runtime Power Bank Led Torch